U-Ian Chan weMirror Boy Group ngoku uxhasa isangqa HealthPod
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » U-Ian Chan weMirror Boy Group ngoku uxhasa isangqa HealthPod
I-Circle HealthPod yinkqubo yokubona ikhaya ephuhliswe yiYunivesithi yaseOxford, eneziphumo zomgangatho we-PCR malunga nemizuzu engama-20. U-Ian ucula ingoma ethi “Lusuku olutsha lweBrand” ukuxhobisa abantu ukuba baphinde baphile ubomi obuqhelekileyo kwaye baqhube uluntu olusempilweni nge-Circle HealthPod.
I-Genetics kunye nenkampani yokuhlola impilo yokuxilongwa kwe-Prenetics Limited, idibanise izandla kunye nelungu elithandekayo leqela lenkwenkwe ethandwayo "Isibuko," u-Chan Cheuk-yin (Ian), ukuba abe ngummeli wemveliso kunye nomdlali kwingoma yorhwebo ye-Circle HealthPod.
I-Circle HealthPod yinkqubo yokufumanisa ngokukhawuleza ebonelela ngeziphumo zomgangatho we-PCR kwi-COVID-19 malunga nemizuzu engama-20 kwindawo yokhathalelo okanye ekhaya. Itekhnoloji yohlaziyo yenza isibhambathiso sokwaphula imiqobo emhlabeni kwaye imise umgama phakathi kwabantu.
Iphuhliswe yiYunivesithi yaseOxford, i-Circle HealthPod yenye yezona nkqubo ziphezulu zokubona ikhaya. Yilebhu enobungakanani bepokotho ebonelela ngokuchaneka okungama-98.4% ekubhaqweni kwe-COVID-19, kubandakanywa ne-99.9% yeentlobo zentsholongwane ezaziwayo ezifana ne-Delta variant virus. Iintlungu ezingenazintlungu ezimfutshane zempumlo zisetyenziselwa ukuqokelela iisampulu phambi kokuba zingene kwi-nucleic acid amplification. I-HealthPod ithatha malunga nemizuzu engama-20 ukuhambisa iziphumo zomgangatho we-PCR ebantwini ngokuthe ngqo kwi-HealthPod okanye ngesicelo sayo esiphathwayo, iyenza ibe lula, ikhawuleze, iqeqeshelwe kwaye ithembeke.
Intsebenziswano idibana nonozakuzaku wemveliso osandula ukubhengezwa u-Ian, ilungu leqela elidumileyo lamakhwenkwe enziwe isithixo "Mirror." Ilizwi elitsalayo lika-Ian lidale iingoma ezininzi ezidumileyo ngemisebenzi ye-Mirror kunye neeprojekthi zobuqu, zonke ezo zamkelwa ngomdla ngabalandeli, besenza u-Ian aziwe ngokuziphatha kwakhe okunelanga kunye nommeli omkhulu waseHong Kong. Ukongeza kwitalente yakhe yomculo, u-Ian naye ungumdlali omkhulu.
Njengelungu elidlulileyo leQela leVolleyball yamadoda aseHong Kong, umthandi wokuqina, i-basketball ace, kunye nomthandi weTaekwondo, u-Ian ukholelwa ekubalulekeni kwempilo. Umfanekiso omhle wempilo ka-Ian umenza abe ngunozakuzaku wemveliso ogqibeleleyo, ekhuthaza abantu ukuba baphinde baphile ubomi obuqhelekileyo kwaye baxhalabele impilo. Umculo ka-Ian ubonisa ibali le-Circle HealthPod ngokubandakanya umyalezo wempilo yomzimba nengqondo kumazwi orhwebo, esasaza ingoma emnandi enethemba lokuphilisa uluntu kweli xesha litsha.
Uthumo lwe-Circle HealthPod luhanjiswa kwingoma ethi "Lusuku olutsha lweBrand" oluculwa ngu-Ian kwaye lwenzelwe ngokukodwa le mveliso yorhwebo. Njengoko ingoma ekhalayo ihambelana nelizwi lakhe eliphakamisayo., U-Ian ucula ngephupha lokuphinda adibanise nehlabathi, uluntu, kunye nabantu abamngqongileyo nge-Circle HealthPod. Ubonisa ukuba olu vavanyo lunokuzisa isiqinisekiso, uxolo lwengqondo nokhuseleko eluntwini. UDanny Yeung, uMseki-ntsapho kunye ne-CEO yeQela le-Prenetics, uthe uluhlu olutsha lweentengiso luya kusasazwa kwi-ViuTV.